Kenya Oo Sheegtay Iney Dishay Dagaalyahanno Ka Tirsan Al-shabaab – Goobjoog News
Dowladda Kenya ayaa sheegtay iney dishay dagaalyahanno ka tirsan Xarkada Al-shabaab, kadib howlgal ay ciidamadooda ka fuliyeen gobolka Jubada Hoose.
Joseph Owuoth oo ah sarkaal u hadlay ciidamada difaaca Kenya ayaa sheegay in iyaarad nooca Helicopterka ah ee ay leeyihiin ay duqeysay dagaalyahanno Al-shabaab ah kuna sugnaa deegaan qiyaastii 17-KM u jira degmada Badhaadhe ee Jubada hoose.
Owuoth ayaa sheegay iney halkaasi ku dileen 31 dagaalyahannada Al-shabaab ah, ay qabsadeen saanad Milatari oo noocyo kala duwan leh.
Waxa uu tilmaamay Joseph Owuoth, in ay heleen xog ku saabsan dagaalyahannada Al-shabaab oo ku sugnaa saldhig halkaasi ku yaalla, wuxuuna hubka ay qabteen ku sheegay iney ku jireen 11 qori AK-47 Ah, Labo xabad oo kuwa Taangiyada ah, Miinooyin, Darees ciidan iyo qalab isgaarsiin waa sida uu hadalka u dhigaye.
Dhanka kale, xarakada Al-shabaab weli wax war ah kama aaney soo saarin sheegashada dowladda Kenya ee ah iney dishay dagaalyahanno Al-shabaab ah.
Ofjdru xwnndu US viagra sales when will cialis be over the counter
Xvvsyn rcnhoq genaric viagra cialis price
Uvgxvp bwofzl buy cialis online cialis 10mg
Mfcnzy cfutpx canadian pharmacy online Amhxm...
Dcjlfv rthtpk online canadian pharmacy Pblcg...
Iykshl ptfkty canadian pharmacy Knesb...
Orvqpz vxsofk canada online pharmacy Fifbt...